Isitudiyo esiLungileyo seApt Kufuphi nesikhululo seenqwelomoya, iilwandle kunye noKutya
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguTamara
Eli gumbi lihle lestudiyo likwindawo esanda kwakhiwa yaseJordani Village eyindawo efanelekileyo yemizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseJuliana kwaye ijongene ngqo neYunivesithi yaseMelika yeCaribbean (AUC) yezoNyango.
Iindwendwe zinentofontofo yokuba nazo zonke iindawo zokuhlala kunye nendawo yokupaka yasimahla kunye nefikelelekayo ngelixa benokufikelela kwiivenkile ezimbini ezifanelekileyo, iindawo zokutyela, iibhari, iilwandle kunye nobomi basebusuku.
Iindwendwe zinokulindela ukuhlala kamnandi, okucocekileyo, nokuzola kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nendawo yokusebenza.
4.79 ·Izimvo eziyi-82
4.79 · Izimvo eziyi-82
Lo mmandla uzolileyo ufanelekile ukuba isiqithi sibaleke nokuba ngaba undwendwela abafundi beSikolo sezoNyango, ishishini okanye ukubaleka ubomi bakho bemihla ngemihla ngenketho yokuphonononga ubomi basebusuku obukufutshane bendawo yaseMaho naseSimpson Bay. Iindwendwe zinokukhetha ukubukela ukutshona kwelanga okuhle, ukuya kuqubha okanye ukuthatha uhambo lothando kwiilwandle ezintathu ezikufutshane kodwa ezahlukeneyo. Iindwendwe zikonwabela ukuthatha imifanekiso yeenqwelomoya ezihlalayo kulwandle oludumileyo lwaseMaho ngelixa zisitya kwiBar edumileyo yeSunset Beach, ziqubha okanye zihamba-hamba zothando eMullet Bay Beach, okanye zizipholele kulwandle lweLGBT olunobuhlobo lweCupecoy olunamawa ekalika.
Umbuki zindwendwe ngu- Tamara
Iindwendwe zihlala zikwazi ukunxibelelana nomninimzi nge-AirBnB app, i-WhatsApp kunye nefowuni yethu ethe ngqo.